Vaovao - Ny Bureau Veritas dia manatanteraka ny fanamarihana isan-taona momba ny ISO Tongke Flow Factory
Ny Bureau Veritas dia manatanteraka ny fanamarihana isan-taona momba ny ISO Tongke Flow Factory
Shanghai Tongke Flow Technology Co., Ltd. dia orinasa manana teknolojia avo lenta izay mifantoka amin'ny R&D sy ny famokarana famokarana tsiranoka sy vokatra mpamonjy angovo tsiranoka, ary mandritra izany fotoana izany dia mpamatsy vahaolana fitsitsiana angovo ho an'ny orinasa. Miara-miasa amin'i Shanghai Tongji & Nanhui Science Hi-tech Park Co., Ltd, Tongke dia manana ekipa teknika za-draharaha. Miaraka amin'ny fahaizana ara-teknika matanjaka toy izany, Tongke dia manohy manohy ny fanavaozana ary manangana ivon-toeram-pikarohana roa momba ny "fanaterana tsiranoka mandaitra" sy "fanaraha-maso fitsitsiana angovo moto manokana".
zon'ny fananana, toy ny "SPH series tena mahomby" priming pumping priming "sy ny rafitra fantsom-pamokarana angovo mahery vaika" est. Mandritra izany fotoana izany Tongke dia nanatsara ny teknolojia paompy nentin-drazana mihoatra ny folo toy ny turbine mitsangana, pump submersible, end- paompy mitsoka sy paompy centrifugal multistage, manatsara be ny haavon'ny teknolojia amin'ny tsipika nentim-paharazana.
Ny ozinina rehetra dia nandalo ny BV voamarina ISO 9001: 2015, ny fanamarinana ny rafitra kalitao ISO 14001 ary ny vokatra patanty dia aondrana any amin'ny firenena 20 mahery.
Ny fanamarinana ISO 9001 dia mampiseho ny fahafahan'ny orinasa hihaona tsy tapaka sy mihoatra ny fanantenan'ny mpanjifa. Noho io antony io dia maro ny mpividy no mitaky ny hanana mpamatsy mari-pahaizana ISO 9001 mba hampihena ny risika hividianana vokatra na serivisy mahantra. Ny orinasa iray mahatratra ny fanamarinana ISO 9001 dia afaka mahazo fanatsarana lehibe amin'ny fahombiazan'ny fandaminana sy ny kalitaon'ny vokatra amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny fako sy ny lesoka ary ny fampitomboana ny vokatra.
Ny ISO 9001 Quality Management System no fenitra fanatsarana kalitao malaza eran-tany, miaraka amina fikambanana iray tapitrisa mahery voamarina any amin'ny firenena 180 manerantany. Io no fenitra tokana ao amin'ny fianakaviana 9000 misy fenitra navoakan'ny International Organization for Standardization (ISO) izay azo ampiasaina amin'ny tanjon'ny fanombanana mifanaraka. Ny ISO 9001 koa dia fototra iorenan'ireo fenitra manokana mifandraika amin'ny sehatra manokana, ao anatin'izany ny fitaovam-pitsaboana ISO 13485), ISO / TS 16949 (automotive) ary AS / EN 9100 (aerospace), ary koa fenitra momba ny rafitra fitantanana be mpampiasa toy ny OHSAS 18001 sy ISO 14001.